MAC OSX – မြန်မာယူနီကုဒ်ဧရိယာ
Wiki Category: MAC OSX
Mobile အသုံးပြုသူများ အနေနှင့် iOS နှင့် Android နှစ်မျိုးစလုံးအတွက် “Ornagai” အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ အဘိဓာန်ကို ကောင်းစွာ ကြားဖူး၊ အသုံးပြုဖူး ကြပါလိမ့်မည်။ Developer ကိုစေတန် ရေးသားပေးထားတဲ့ “Ornagai” အဘိဓာန်မှာ Mac အတွက် ယခင်က ‘ဇော်ဂျီ’ ဗားရှင်းနဲ့သာ ရှိနေခဲ့ပြီး၊ ယခုအခါ မြန်မာယူနီကုဒ်ဗားရှင်း အနေနှင့် ထပ်မံ၍ ပံ့ပိုးပေးထားပါတယ်။ အဆိုပါ “Ornagai” အဘိဓာန်ကို Mac တွင် ထည့်သွင်းပြီး Safari, iBook တို့မှ ဖတ်ရှုသမျှ အင်္ဂလိပ်စာများကို မြန်မာဘာသာ အဖြစ် အနက်အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆို ရှင်းလင်းချက်များကို ယူနီကုဒ်စနစ်ဖြင့် ဘာသာပြန်ပေးနိုင်ပါလိမ့်မည်။ ₪ Download Unicode Ornagai Dictionary (DropBox) ၁။ Download Read More …
ကွန်ပြူတာအတွက်ကတော့ Text Converter တင် မကဘဲ စုစုပေါင်း သုံးမျိုးပေါင်းပေးထားပါတယ်။ 1. Text Converter 2. Filename Converter 3. MP3 Tag Converter ၁။ အတွက်ကတော့ ပြောဖို့ မလိုလောက်တော့ပါဘူး။ APK နဲ့ ခပ်ဆင်ဆင်ပါပဲ။ မပါတာဆိုလို့ Image ဖိုင် ပြောင်းတာပါပဲ။ ၂။ Folder လိုက် ရွေးပြီး Folder ထဲမှာ ပါသမျှ file တွေကော folder တွေကော Zawgyi ကနေ Unicode အဖြစ် အကုန် ပြောင်းခိုင်းလို့ ရပါတယ်။ Auto detect ကို On ထားရင် ဇော်ဂျီလို့ ယူဆရတဲ့ ဖိုင်တွေပဲ ပြောင်းပါလိမ့်မယ်။ Read More …
KeyMan Keyboard အသုံးပြုခြင်း
KeyMan ကီးဘုတ်ဆိုတာ Window OS တွေအပြင် အခြား iOS, Android တွေမှာပါ အသုံးပြုနိုင်တဲ့ ကီးဘုတ် အမျိုးအစားတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကီးမန်း ကီးဘုတ်ကို အသုံးပြုခြင်းဖြင့် မြန်မာစာကို သင်ပုန်းကြီးအတိုင်း ရိုက်နိုင်ပါသည်။ စာရိုက်ရ လွယ်ကူပါသည်။ “ကြောင်း” ဟုရိုက်ချင်လျှင် [ေ + က +ြ+ာ+ င +်+ း]ဟု ရိုက်ရပါမည်။ ၁။ Installation ပြုလုပ်ခြင်း KeyManDesktop_11.0 ကို ဒီကနေ ဒေါင်းပါ [For Windows] [For MAC OS X] Pyidaungsu MM.kmx ကိုဒိကနေ ဒေါင်းပါ [Download] ပြီးလျှင် KeyManDesktop Read More …
MacOS နှင့် မြန်မာယူနီကုဒ်
macOS နှင့် မြန်မာယူနီကုဒ် Mac ကွန်ပြူတာမှာ ယူနီကုဒ်ပြောင်းလိုသူတွေအတွက် ပြောင်းနည်းအတိအကျ လမ်းညွှန်ချက်နဲ့အတူ လိုအပ်တဲ့ Keyboard, Fonts, Converter တွေ စုံစုံလင်လင်ထည့်ပေးထားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ Download ချပါ >> https://bit.ly/2pOBYP0 Credit: Ko Nay Zar Aung Operating System အ​ကြောင်း Mac OS X [ macOS ] သည် Apple ၏ desktop operating system တစ်ခုဖြစ်ပြီး ယခုလက်ရှိတွင် Mojave မှာ တရားဝင်နောက်ဆုံး ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ နောက်ထပ်အသစ်ထွက်ရှိလာမည့် ဗားရှင်းအသစ်မှာ မှာ macOS Catalina ဖြစ်သည်။ မြန်မာယူနီကုဒ်ကို Maverick မတိုင်မှီ Mountain Lion Read More …